Turkiga: Waxaan xuduudaha u fureynaa qoxootiga Yurub u socdo. - NorSom News
Turkiga: Waxaan xuduudaha u fureynaa qoxootiga Yurub u socdo.
Dowlada Turkiga ayaa shaley sheegtay inay xuduudaha u fureyso kumanaanka kun ee qoxootiga ah ee dalkeeda ku sugan, kuwaas oo raba inay u gudbaan Yurubta Woqooyiga.
Sarkaal katirsan dowlada Turkiga oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowlada Turkigu ay amar ku siisay ciidamada ilaalada xuduudaha iyo booliskaba, inay fasaxaan dadka qoxootiga ah ee raba inay u gudbaan dalalka kale ee Yurub.
Turkiga iyo EU-da ayaa sanadkii 2015 ku heshiiyay in Turkiga ay xuduudaheeda ku celiso qoxootiga usoo gudbaya Yurub, taas badalkeedana ay EU-du Turkiga ku taageerto taageero dhaqaale. Heshiiskaas oo dhowr mar oo hore dib loo cusbooneysiiyay, ayaa hada u muuqdo mid meesha ka bixi karo.
Waxaa isla saakaba xuduudaha iyo xeebaha dalka Giriiga lagu arkay kumanaan qoxooti ah oo isla xaleyba kasoo gudbay xuduudaha dalka Turkiga.
Go´aanka Turkiga ayaa kusoo aadaya xili dalka Siiriya ay ka socdaan dagaalo xoogan, kuwaas oo deegaankoodii kasoo barakaciyay malaayiin qof oo Siiriyaan ah.
Xigasho/kilde: Migranter har allerede nådd Hellas.
Previous articleOslo-Bærum: 3 qof oo cusub oo laga helay Viruska hargabka Corona.
Next articleLaamaha caafimaadka oo telefoon gaar ah u sameeyay warbixinada Hargabka Corona.